Maxaa Cusub – Page 47 – Shabakadda Amiirnuur
Dhageyso Barnaamijka Diiradda Jimcaha oo Lagu Falanqeeyay Weerarkii BALLIDOOGLE.
Taliyihii Guutada 3-aad Ee Ciidanka Bankaraf oo Kamid Noqday Xubnihii Lagu Dilay Xaawo Cabdi.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa khasaarihii ka dhashay weeraro qaraxyo loo adeegsaday oo shalay galab ay Xarakada Al-Shabaab la beegsatay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidanka gaarka ee Mareykanku uu tababartay ee Bankaraf. Sida xogtu ay xaqiijineysay weerarada oo labo qarax ahaa islamarkaana lagu burburiyay laba gaari ayaa […]
DEGDEG: In Ka Badan 15 Askari oo Bankaraf Ah oo Lagu Dilay Qaraxyo Gaadiidkooda Lagula Eegtay Inta U Dhaxaysa Xamar Iyo Afgooye.
Askar ka tirsan ciidamada gaarka ee uu Mareykanku tababartay islamarkaana la yiraahdo Bankaraf ayaa maanta ku hoobtay qaraxyo ka dhacay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Afgooye oo ay isticmaalaan mararka ay Ballidoogle iyo Xalane isaga kala gooshayaan. Ciidamadan oo kolonyo ahaa islamarkaana kasoo baxay magaalada Muqdisho ayaa waxaa qarixii ugu horreeyay […]
5 Ka Tirsan Ciidamada DF oo Lagu Dilay Qarax Ka Dhacay Sh/Hoose.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa saacado ka hor weerar qarax ah ka geysatay xerada Ceel-saliini oo u dhow magaalada Marko ee gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasoo ay fariisin ku leeyihiin ciidamo ka tirsan kuwa DF. Qaraxa oo ahaa mid xooggan ayaa mar qura xerada gudaheeda ka kacay kaasoo haleelay in ka badan […]
AFRICOM Oo Riwaayado is burinaya kasoo saartay Weerarkii Ballidoogle.
Taliska ciidamada Maraykanka ee qaaradda Africa ayaa siyaabo kala duwan oo is burinaya uga hadlay weerarkii weynaa ee Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab maalintii Isniinta ku qaaday saldhiga garoonka Ballidoogle oo ah saldhiga ugu weyn ee Maraykanku ku leeyahay Soomaaliya. Saacadihii koowaad ee uu weerarku socday, waxay Africom xaqiijisay jiritaanka weerarka, iyadoo […]
Dowladda Kenya Ayaa Dad Muslimiin Ah Ku Gumaaday Magaalada Mumbasa.
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya ayaa sheegaya in ciidamada Booliska ee qaabilsan ladagaallanka waxa loogu yeero Argagaxisada ay toogasho ku dileen dad muslimiin ah. Warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegtay in ciidamo hubeysan ay weerar ku qaadeen xaafadda Likoni oo kamida ah xaafadaha ugu caansan magaalada Mombasa ee dhulalka muslimiinta xeebaha. […]
Sarkaal Ka Tirsanaa Dowladdii Kacaanka oo Is Dul Taag Ku Sameeyay Weerarkii BALLIDOOGLE. (Dhageyso)
Mid kamid ah saraakiishii hore ee Soomaaliya ayaa qiimeyn ku sameeyay weerarkii cuslaa ee ay shalay Xarakada Al-Shabaab ku qaaday xerada Ballidoogle oo muddo dhowr sano ka hor ay qabsadeen ciidamada Mareykanka. Col. C/qaadir Axmad Nuur, oo muddo dheer kasoo mid ahaa saraakiishii dowladdii kaligii taliye Maxamad SIyaad, ayaa sheegay […]
DEG-DEG: Inkabadan 100 Askari Oo Maraykan ah oo lagu dilay Howlgalka Ka socda Ballidoogle.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa shaaca ka qaaday khasaare horudhac ah oo ka dhashey weerarka culus ee dagaalyahanno katirsan Ciidamadeeda ay ku qaadeen saldhiga Ballidoogle oo ah saldhiga ugu weyn ee Maraykanku ku leeyahay Soomaaliya. War kasoo baxay Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in howlgalka weli socda ay ku dileen […]
Al-Shabaab oo Bayaan Kasoo Saaray Weerarka Ballidoogle.
Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab, waxay goor dhow baahisay bayaan degdeg ah oo ku saabsan weerarka culus ee barqanimadii maanta lagu qaaday garoonka Balidoogle. Bayaanka oo ay baahisay musasada Al-kataa’ib ayaa waxaa lagu yiri: “Subaxnimadii hore ee saaka, ciidamo gaar ah oo ka tirsan guutada Istish-haadiyiinta ee Xarakada Al-Shabaab ayaa duullaan halyeeynimo […]
WAR DEG DEG: Mujaahidiinta oo weerar culus ku qaaday saldhiga Maraykanka ee Balidoogle, iyo qaybo kamid ah saldhigga oo gacanta lagu dhigay
Ciidamada Mujaahidiinta ayaa goordhowr kahor weerar lixaad leh ku qaaday saldhiga ugu weyn ee ciidamada Maraykanku ay ku leeyihiin Soomaaliya kaas oo ku yaalla Garoonka diyaaradaha ee Balodoogle. Weerarka oo bilowday daqiiqado yar kahor ayaa waxaa uu ku bilowday gaadiid lagu soo raray walxaha qarxa kuwaas oo gudaha u galay […]
Daawo Sawiro Ciidamada Alshabaab oo Bacaadweyne ku sugan.
weeraro lagu qaaday Shisheeyaha iyo Ciidamada maamulada u daacadda ah.
Sarkaal Caan ahaa oo lagu dilay Shabeelaha dhexe.
Daawwo Sawrio :-Muqdisho iyo wejiga dhab ah ee ay iminka leedahay.